Ziyekeleni lezo nkomo aziseluswe yini: Kayiqokwa nguhulumeni nezinkantolo - Bayede News
Isithombe: KwaZulu-Natal Government
ISILO esisha nenselelo yokuma lapho kwakumi khona uyise. Kulokhu uhulumeni ufakwe yiNdlunkulu
Akukaze kube yimfihlo ukukhathazeka kukaMdlokombane (iSILO esidala) mayelana nalokhu ayekubiza ngobudedengu bukaHulumeni ezindabeni ezithinta uBukhosi. Lapha iNdlondlo yabe ibalisa ngesimo eyabe isichaza njengenhlekelele edalwa ‘ngabomu’ zisebenzi zoMnyango uma kufika odabeni lokubekwa kwaMakhosi ezizwe. INdlondlo yayisola uHulumeni (kubandakanya nezisebenzi) ngokuxova imizi yaMakhosi ezizwe. Kanti ngakolunye uhlangothi imizi yaMakhosi ezizwe yabe ikhala nsukuzaphuma koMkhulu ‘ngokugxambukela’ kukaHulumeni ezindabeni zomndeni nokwabe kuyishiya ixabene. Lesi simo saholela ekubanjweni komhlangano wemindeni eyabe ithinteka. Umhlangano lona owabe ungomhla ziyisi-6 kuMandulo ngowezi-2018 eSigodlweni OSuthu, wabe uthanyelwe yimindeni kwathi ngasohlangothini lukaHulumeni kwakukhona owayenguNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMhlonishwa uWillies Mchunu kanye noMphathiswa uNomusa MaDube Ncube.
Phakathi kwezikhalo zale mindeni kwabe kuyizinsolo zokuthi izikhulu zoMnyango noMphathiswa baxova ulibo lwemindeni nokugcina sekubekwe abangafanele ukuba ngamakhosana alezo zizwe. Lapho iNdlondlo eyabe ibonakala nasebusweni ukuthi lolu daba luyinengile yathi luyithintile ‘kuyishwa ukuthi lo mhlangano ungowokuqala owenzeka ngaphansi kukaHulumeni wedemokhrasi’ nokukhomba ukuthi ‘kunenkinga’. Khona lapho Omdala wabe esesola labo athi banetulo lokuxova umndeni kaZulu nathi abakwenzayo kwehlula ababusi abangamakoloni noHulumeni wamaBhunu.
“Umlando uyasivezela ukuthi umndeni kaZulu wawuhlale njalo ungabavikeli beSihlalo. Kungenxa yalezi zathu Zulu, ngisukumele phezulu uma ngibona ukuthi kukhona okuphazamisa isakhiwo somndeni. Njengoba nilapha niyimindeni eyahlukene, nize esibayeni senu esikhulu okuyiseNdlunkulu,” kusho iSILO esidala.
OMdala wabe esethi: “Bantu bakaBaba, ukuﬁka kwenu namuhla kufakazela khona ukuthi uBukhosi lobu bunomnikazi. Lokhu ngithi angikusho ngoba lapha phandle sekukhona ukudideka ukuthi ubani umelusi. Kulaba abanaloku kudideka ngithi kubo abadede ngoba lezi zinkomo abazama ukuzelusa zinomelusi futhi nazo ziyamazi umelusi. Ayikho ingcebo nenhlebo engenza zingamazi umelusi,” kusho iSILO okwase kuzwakala ukuthi sase sifudumala. Khona lapho sakhala ngezisebenzi zoMnyango esathi ziyaxova: “Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angigcine iminyaka engama-70 ukuze ngibone yonke inhlobo yoHulumeni kanye nezigebengu zakhona,” kusho iNdlondlo.
Kulabo eyababiza ngamadungamuzi azoxova uZulu, Omdala akananazanga: “Ezikhathini ezedlule, abafo bake bazama ukuba ngabelusi bengamaqhude okuzibeka, behluleka. Kwala ngisho sebewasusa aMakhosi angokhokho bami bewabopha, bewadingisa. Lokho akwenzanga uZulu angamazi umelusi. Nangesenu isikhathi, awukho umoya noma imimoya engahlukanisa mina nani noma nina nami. Owenza njalo uyohlulelwa umlando, wona uyombeka njengesehluleki nomxovi wobunye bukaZulu. Lelo dungamuzi liyokwaziwa phakathi kwabantu bakaBaba namuhla nangunaphakade njengenyoka etshalelwe ukuba idunge ubunye bethu.”
Mhla ziyisi-7 kuNhlangulana ngowezi-2016, iNdlondlo yaphawula ngezisebenzi zoMnyango eyathi ziyaxova: “Okunye engifisa ukukuphawula udaba lwabantu abasebenza izindaba zoBukhosi. KuHulumeni ngeluleka ukuthi kube noqeqesho olunzulu ngoba uma izisebenzi zoMnyango zingazi ngoBukhosi kulukhuni kabi ukuba zisebenze nabo noma zibuvikele. Yisikhathi manje sokuthi kungathathwa noma ngumani nje kuthiwe akayosebenza naMakhosi ngoba uBukhosi lobu akuyona indawo yokulahla abantu okungaziwa ukuthi kumele batshalwephi uHulumeni. Nginxusa ukuba iNdlunkulu neNdlu bahlanganise uhlelo bebambisene noMnyango ukuze kuqeqeshwe zonke izisebenzi ezithintana naMakhosi kanye noBukhosi. Kanjalo nalezo ezisebenza ngomhlaba woBukhosi
Emuveni kwenzinyanga nje ezimbili iNdlondlo yebuzile sekuqubuke ukukhuluma ngodaba oluthinta ukugamanxa kwezinye izinhlaka odabeni lweSihlalo. Lokhu kuqalwe wukuvela kwezindaba ezithi izindaba zeSihlalo zingase zeluswe zinkantolo. Emaphepheni asenkantolo, okulicala elifakwe eNkantolo Enkulu ePietermaritzburg. Abamangali phakathi kokunye bathe uHulumeni esifundazweni kanye nakuzwelonke akame ngezinhlelo ezithinta iSihlalo kuze kube inkantolo iyanquma. Lokhu uma kwamukeleka kukhomba ukuthi izinkantolo zizongena shi odabeni lweSihlalo. Kuthe kusabatshazwa lokho labe selingena negama likaHulumeni. Lona lingene ngezindlela ezahlukene; kuqale lapho kuvela ukuthi uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMhlonishwa uZikalala kanye noNgqongqoshe uMaDlamini Zuma bebecele ukuba ‘kube nokungenelela’ odabeni oluthile noluthinta sona iSihlalo. Akugcinanga lapho ngoba elinye lamaphephandaba esilungu iNatal Witness libe selisho nokuthi uNgqongqoshe uCele nowayenguMengameli uZuma nabo basezinhlelweni ezifanayo.
Ekhuluma nabezindaba kuleli sonto, uNdunankulu kaZulu uMntwana waKwaPhindangane uthe kuwumbono weSILO neNdlunkulu ukuthi kasikho isidingo sokungenelela kukaHulumeni ezindabeni zakoMkhulu.
“Iphephandaba iThe Witness lithi uNgqongqoshe Wamaphoyisa uMhlonishwa uBheki Cele, nowanguMengameli uJacob Zuma kuthiwa abaxazulule okubizwa ngokuthi ukungqubuzana okuseSigodlweni. IWitness ithi bakwenza lokho ngemiyalelo evela ‘kwabakhulu ku-ANC’.
“NgokweSILO namalungu eNdlunkulu akunasidingo sokungenelela. Emveni kokuqokwa kweSILO ngoLwesihlanu olwedlule, uMhlonishwa uNdunankulu waKwaZulu-Natal noMhlonishwa uNgqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu bangithinta bethi bangangenelela eNdlunkulu. Ngabacebisa ngokuthi ngizoludlulisela iSILO udaba lwabo,” kuchaza uMntwana.
Imigubho yeminyaka engama-50 siseSihlalweni
Uqhubeke wathi: “Ngokubonisana neSILO neNdlovukazi uMaZungu ngakubonga ukungenelela kukaNdunankulu nokukaNgqongqoshe, kodwa ngaleso sikhathi babezizwa bengakwazi ukuxazulula izinkinga zabo ngaphandle kokufuna usizo engxenye. Lokhu ngakudlulisela kuNdunankulu.”
Okwesibili ukuthinteka kukaHulumeni kwezeSihlalo kube yimibiko egcine isiyinkombankombane yokuthi ngempelasonto kuphume umlayelo ovela kuHulumeni (amaphoyisa) nobuhoxisa ezokuphepha ngesizathu sokuthi “iSILO kasikabekwa eSihlalweni ngokusemthweni”. Lezi zindaba zinyakazise izwe njengoba kube nokusolwa kukaHulumeni ngalokhu. Ememezela lokhu uMntwana uthe: “Ngikhathazeke kakhulu ngezindaba ezivela eSigodlweni KwaKhangelamankengane zokuthi umbutho iSAPS VIP Protection Unit usuyalelwe ukuthi uhoxe. Ngakho-ke ngeke besasivikela iSILO. Kuzwakala ukuthi laba abakhona eSigodlweni bazohoxa khona namhlanje ebusuku, kanti labo abazobe belapho kukhona khona iSILO bazoba khona ngobusuku banamhlanje bahoxe ekuseni.
“Yimina, iSILO nanoma yiliphi ilungu laseNdlunkulu asibikelwanga ngalesi siqumo sikaHulumeni. Nokho amalungu eSAPS aseSigodlweni athole imiyalelo evela kuKhomishana Wesifundazwe, othi ngesizathu sokuthi iSILO asikabekwa uHulumeni ngalokho asifanelwe ukuvikelwa njengomuntu omqoka. Ube eseyiphosa kuZulu indaba: “Ngakho-ke sinxusa isizwe ukuba sisisize ekutholeni ukuvikeleka kweSILO ukuqinisekisa ukuthi sivikelekile kulesi sikhathi esibucayi.”
Lokhu kudale inkulumompikiswano njengoba iqembu elibusayo KwaZulu-Natal noNdunankulu wesifundazwe kanjalo nokhulumela amaphoyisa beyiphikisile le mibiko. Inhlangano ebusayo KwaZulu-Natal ngomlomo kaNobhala wayo kweleNdlovukazi uMthaniya, uMnu uNtuli yathi akulona iqiniso ukuthi ezokuphepha zihoxisiwe eSigodlweni KwaKhangela. UMphemba wathi oweluleke uNdunankulu kaZulu ngalokhu “unezinhloso ezimbi zokuqhatha uHulumeni oholwa uKhongolose neNdlunkulu.”
NoNdunakulu naye uhambe emagameni kaNtuli ekutheni okubikwe nguMntwana akulona iqiniso. UZikalala namaphoyisa kabagcinanga lapho ngoba izolo (ngoLwesine) baphikelele kwaKhangelamankengane phakathi kokunye beyoqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle.
Konke lokhu kukhomba ukuzazelana kwalabo abathi uHulumeni nezinye izinhlaka azingathi ntshi ezindabeni zeSihlalo kanye nalabo abathi izinhlaka ezifana noHulumeni nezinkantolo zingahle zibe umalamulela kwezaseNdlunkulu neSihlalo. Kusase kuseni ukusho ukuthi iyozala nkomoni kepha okusobala wukuthi oseSihlalweni ubhekene nenselelo eyaqashelwa nguyise mayelana nobudlelwano phakathi kweSihlalo noHulumeni kanye nobudlelwano phakathi koBukhosi jikelele noHulumeni. Kulezi zinsuku ezizayo kuzocaca ukuthi ukunyathela koseSihlalweni khona kuzothini kulolu daba nakwenziye ezabe zibekwe eqhulwini nguyise.